बलिउडकी सबैभन्दा महँगी आइटम गर्ल कैटरीना, एक गीतको लिन्छिन् यती धेरै पारिश्रमिक ! – दैनिक नेपाल न्युज
बलिउडकी सबैभन्दा महँगी आइटम गर्ल कैटरीना, एक गीतको लिन्छिन् यती धेरै पारिश्रमिक !
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका कैटरीना कैफ अभिनित फिल्म ‘भारत’ले बलिउडमा तहल्का मच्चायो । फिल्मले अहिले सम्म विश्वभरबाट तीनसय करोड बढीको व्यापार गर्न सफल भयो ।
फिल्ममा सलमानसँग कट्रिनाले जोडी बाँधेकी थिइन् । फिल्ममा उनको अभिनयलाई अत्यन्तै रुचाइएको थियो । सलमान खान संग प्रेमको हल्ला निकै नै मच्चियो सुन्दरताकी खानि उनको सलमान संग मात्र नभई अभिनेता रणविर कपुर संग पनि प्रेम रहेको थियो । पछि रणवीरले कट्रिनालाई धोकादिएपछि कट्रिना अहिले सिंगल छिन् ।अहिले ।
सुन्दर नायिका भनेर चिनिने कैफ अहिले मात्र नभई बालापनमा पनि उतिकै सुन्दर र क्युटि थिइन् । बेला बेला बच्चाबेलाका उनका तस्विरहरु मिडियामा छाइरहन्छन् चिकनी चमेली’ र ‘शीला की जवानी’ जस्ता आइटम गीत गरिसकेकी छिन्। उनले एक आइटम नृत्यको लागि लगभग ३ करोड भारतीय रुपियाँ लिन्छिन। उनी सिर्फ सम्बन्धको आधारमा मात्र आइटम नृत्य गर्छिन्।